सालको पातको ‘भ्यूज’ हालसम्मकै सर्वाधिक, कति करोड पुग्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सालको पातको ‘भ्यूज’ हालसम्मकै सर्वाधिक, कति करोड पुग्यो ?
साउन २६ गते, २०७७ - ११:२५
गायक विश्वकर्माले गीतले यतिसम्म चर्चा पाउँला भनेर पहिले नसोचिएको प्रतिक्रिया दिए। उनको साङ्गीतिक जीवनको मानक गीतका रुपमा सालको पातलाई सधैँ सम्झिने छ । अभ्यास डिजिटल म्युजिक प्रालिद्वारा निर्मित गीत ‘वसन्त थापा’ नामको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको थियो । एक लाख सब्सक्राइबर ९युट्युब च्यानलको समूह सदस्य० पुगेपछि उक्त च्यानलले अर्वाडसमेत पाइसकेको छ ।
शुरुमा युट्युब एकाउन्ट परीक्षणमा रहने र मोनिटाइज भएपछि मात्र पैसा आउने कलाकार बताउँछन् । श्रव्य क्यासेट, सिडी, सिआरबिटी हुँदै सङ्गीत व्यवसाय अहिले युट्युबमा केन्द्रित छ । प्रविधिको फड्कोले सङ्गीत बजारको स्वरुप बदलेको हो । सालको पातले पनि सम्बन्धित लगानीकर्ता÷कलाकारलाई आकर्षक कमाइ दिलाएको छ । गायक विश्वकर्मा र सङ्गीतकार थापाबीच अर्को लोकदोहोरीमा पुनः सहकार्य हुँदैछ । “शब्द रचना प्रह्दाद सुवेदीले गर्नुभएको छ, गायिका को राख्ने निश्चित भइसकेको छैन”, थापाले भने।
साउन २६ गते, २०७७ - ११:२५ मा प्रकाशित